3.	आफ्नो डेटाबेस कसरी खोतल्ने ? | Investigative Journalism Manual
Home > खण्ड > खण्ड पाँच > 3.	आफ्नो डेटाबेस कसरी खोतल्ने ?
वित्त, पैसासम्बन्धी स्टोरी गर्दा मात्रै डेटाबेस खोतल्नुपर्छ भन्ने छैन । सामाजिक सञ्जालको विश्लेषण गर्दा निश्चित ठाउँका आतंककारी सञ्जाल, राजनीतिक दलका समर्थक र प्रभावशाली र धनी मानिसका सम्बन्धबारेमा राम्रा स्टोरी तयार गर्न सकिन्छ । यी सञ्जालमा निश्चित पेशा, निश्चित ठाउँ अथवा कुनै राजनीतिक दलका प्रभावशाली मानिस जोडिएका हुनसक्छन् । उनीहरूले कति पैसा कमाउँछन्, उनीहरू कसका लागि काम गर्छन्, कोसँग उठबस गर्छन् जस्ता जानकारीका आधारमा सामाजिक सञ्जालको तस्वीर झल्कन्छ । यसले समाजमा उनीहरू कति प्रभावशाली छन् भन्ने देखाउँछ ।
5. प्रश्नोत्तरी – अनुसन्धान, अनुसन्धान, अनुसन्धान